प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सभामुख नै गएनन्, मंगलवार बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक पनि स्थगित
ओली सरकारवि’रु’द्ध सडकमा उत्रिएको काँग्रेसलाई बाबुरामले दिए बधाई
काठमाडौ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकारले गरेको भ्र’ष्टा’चा’रवि’रु’द्ध सडकमा उत्रिएकोमा काँग्रेसलाई बधाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारको निरंकुशता
सरकारवि’रु’द्ध कैलालीबाट गगनले ग’र्जिं’दै भने,‘ह’त्या’रालाई गृहमन्त्रीको संरक्षण, बालुवाटार हडप्ने अर्थमन्त्री’
कैलाली । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले यो सरकार इतिहासकै भ्र’ष्ट भएको आ’रो’प लगाएका छन् । थापाले अहिलेको सरकार भ्र’ष्ट। नैतकता नभएको र अधिनायकवाद उन्मुख भएको आरोप
प्रधानमन्त्री ओलीले नै राजावादीलाई सडकमा ल्याए, राजावादीको आन्दोलनमा नेकपाकै नेता
काठमाडौ । पछिल्लो समय संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध राजावादीहरुले राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा मुलुकका ठूला शहरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकासहित झापा, मोरङ, वीरगञ्ज, पोखरा, बुटवललगायत मुलुकका प्रमुख शहरहरुमा
कांग्रेसले १० लाख मानिस सडकमा उतार्ने : माक्स र सेनिटाइजर लगाएर सडकमा आउन देउवाको अपिल, मुख्य नेता कहाँ सहभागी हुँदै छन् ?
काठमाडौ । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ । सोमवार देखि चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको कांग्रेसका मुख्य नेताहरुले विभिन्न जिल्लामा सहभागीता जनाउने
देशव्यापी विरोध कार्यक्रमका बारेमा देउवाले भनेः काँग्रेसले अझ प्रखर ढंगले नेतृत्व गर्नेछ (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अब काँग्रेसले अझ प्रखर ढंगले नेतृत्व गर्ने बताएका छन् । काँग्रेसले मुलुकलाई हरेक चुनौतीका घडिमा निकास र नेतृत्व दिएको भन्दै अहिलेको जटिल समयमा
कमानसिं र नारायणकाजीको विवादमा प्रचण्डको ‘इन्ट्री’
काठमाडौ । पूर्व राजदुत कमानसिं लामा र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीचको लेनदेन सम्बन्धी विवादमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिकृया दिएका छन् । उनले
ओली ब्याक भए ?, अब के हुन्छ नेकपामा
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सहमतिको प्रयास सकारात्मक दिशातर्फ बढेको छ । पार्टी बैठकमै नआउने अडान लिएका ओली आज बस्ने स्थायी कमिटी
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकः सहमतिबाट अघि बढ्ला कि बहुमतबाट ?
काठमाडौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठक आज बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि सहभागी हुने ओली निकट नेताहरुले बताएका छन् । गत
आज ओलीले राजनीतिमा ठुलो निर्णय लिंदै
काठमाडौ – सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अझै गहिरिने संकेत देखिएको छ। सचिवालयमा अल्पमतमा परेका केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध स्थायी कमिटीमा बहुमत जुट्न नदिन केही नेतालाई मध्यमार्गी भूमिका